भट्टराईलाइ भट्टराइको जवाफ: ओलीले ट्रेलर देखाउँदा भारत युरोपियन युनियनसंग घोप्टो परेर रोएको भुल्यौ ? « Naya Bato
भट्टराईलाइ भट्टराइको जवाफ: ओलीले ट्रेलर देखाउँदा भारत युरोपियन युनियनसंग घोप्टो परेर रोएको भुल्यौ ?
ओलीजीसँग भारतीय हस्तक्षेप रोक्ने समाधान के छ , टुँडीखेलमा बहस गर्न तयार छु- बाउराम
बाउरामजी! भारतिय हस्तक्षेप हटाउने ओलीसंग के उपाए छ भन्ने उपाएका ट्रेलर मात्र ओलीले देखाउँदा भारत युरोपियन युनियनसंग घोप्टो परेर रोएको धेरै भा छैन । त्यसैबाट आत्तिएर माकेनेकाको मित लगाइदिएको हो । बाउराम र मधेशी मोर्चाके मित लगाउने प्रयास जारि छ ।
जहासंम्म भारतको हस्तक्षेप हटाउने उपाए छैन, ओलीले केहि गर्न सक्दैनन, म बहस गर्न तयार छु भन्ने सवाल छ; भारतलाइ ६ महिनामै हायल कायल पार्ने ओलीको कुरा छोडौ, हिम्मत छ भने आउनुस हामीसंग बहस गर्न, घैटोमा घाम लाग्नेगरि बहस गरौला कसरि भारतिय दादागिरि अन्त गर्ने भन्ने कुरामा; उपाए हामी बताइदिन्छौ ।
पहिलो प्रश्न: भारतिय हस्तक्षेप हटाउने उपाए छैन भने १९५० को सन्धि खारेजी, भारतियलाइ नेपालमा वर्क पर्मिट, भारतिय सवारि साधन आवत जावतमा रोक देखी भारतिय बिस्तारबादको अन्त बिना नेपालमा केहि गर्न सकिदैन, सुरुङ युध्ध लडेर भारतलाइ परास्त गर्छौ भन्दै १७ हजार गरिव नागरिकको जीवन किन सत्यानाश गर्यौ? जवाफ यहिबाट शुरु गरे हुन्छ ।